Denmark | Somaliska
Deenmark oo beerista maandooriyaha Cannabis-ka la ogol yahay in la beero
Kolka aad maqasho maandooriyaha Cannabis ee misna la leeyahay waa la ogol yahay beerashadiisa ha moodin in taasi macnaheedu tahay in laga dhigay xor oo ciddii doonta ay beeran karto. Maya arrinku sidaas maahan...
Hooyo soomaaliyeed oo lugu eedeeyey jirdil ay carruurteeda u geeysatay oo xabsi loo taxaabay
Maxkamad ku taala magaaladda Koobanheegan ee dalka Denmark, ayaa waxeey xabsi saddex bilood ah ku xukuntay hooyo soomaaliyeed oo dalkaasi degan, ka dib markii lugu edeeyey ah ineey jir dil u geeysatay afar carruur...
Deenmark: Qooys soomaali ah oo sharcigii lagala noqday dibna loogu celinayo Soomaaliya
Wararka aanu ka heleeyno dalka Deenmark, ayaa sheeegaya in qooys soomaaliyeed oo dalkaasi ku nool lagala noqday dal ku joogii dalkaasi. Qooyskan ayaa ka mid ah soomaali badan oo dowlada dalkaasi sheegay sanadkii hore...
Inta badan baarlamaanka Denmark ayaa taageeray qorshe cusub oo qaxootiga wadankaasi ku nool looga mamnuucayo in ay ka baxaan xeryaha qaxootiga. Qorshahaan ayaa qaasatan ku wajahan dhalinyarada qaxootiga ah, oo lagu soo rogayo bandow....
Afti ururin laga sameeyay wadanka Denmarka ayaa muujinaysa in qaar badan oo ka mid ah shacabka wadankaas ay aaminsanyihiin in Denmark iyo guud ahaan wadamada reer galbeedka ay dagaal kula jiraan diinta Islaamka. Aftidaan...
Masaajid haweeney imam ka tahay oo laga furay Denmark
Magaalada Copenhagen ee caasimada Denmark ayaa waxaa laga furay masaajid ay imam ka tahay haweeney keliya, balse ay ku tukan karaan ragga iyo dumarka. Haweenka ka dambeeya furitaanka masaajidkaan ayaa ku tilmaamay fikradooda mid ay...
Magaalo ku taala Denmark oo hilibka doofaarka waajib ka dhigtay
Magaalo ku taala wadanka aan dariska nahay ee Denmark ayaa waajib ka dhigtay in hilibka doofaarka laga bixiyo magaaladaas. Siyaasiyiinta degmada Randers ayaa go’aamiyay in ay waajibtahay in hilibka doofaarka laga helo iskuulada, xanaanada iyo...
Dowlada Denmark ayaa shalay soo bandhigtay arin cusub oo aduunka oo dhan la yaabay, taasoo ay ku doonayaan in ay qaxootiga cusub ku cabsi galiyaan in ay iska dhiibaan wadankaasi. Dowlada Denmark ayaa sheegtay...
Dowlada cusub ee Denmark ayaa shaqadeeda ugu horeysay waxay ku bilowday in ay nolosha ku adkayso qaxootiga, iyagoo lacagtii kaalmada ahayd ee la siin jiray dadka magangalyo doonka ah kala bar dhimay. Ujeedada lacagta...
Cunsuriyiinta oo ku guuleystay doorashada Denmark
Doorashadii shalay ka dhacday wadanka dariska ah ee Denmark ayaa waxaa ku guul weyn ka gaaray xisbiga cunsuriga ah ee lagu magacaabo Danish People’s Party. Xisbigaan oo la mid ah xisbiga SD ee ka dhisan Sweden...
Denmark oo markii ugu horeysay Soomaali ku celisay Muqdisho
Denmark ayaa isbuucii la soo dhaafay markii ugu horeysay magan galyo doon Soomaali ah qasab ugu celisay Muqdisho. 4 nin oo Soomaali ayaa diyaarad lagu qaaday kuwaasoo laga dejiyay ayroboorka Muqdisho sida uu qoray information.dk. Arintaan...
Dowlada Denmark ayaa soo bandhigtay qorshe cusub oo lagu adkaynayo sharciyada la siiyo qaxootiga. Denmark ayaa bilaabaysa in dadka qaxootiga ah la siiyo sharci 1 sano ah oo ka dibna qiimeyn lagu samayn doonom,...